1 Afarta "Injiil" (The Four Gospels)
1.1 Aragtida Masiixiyiinta
1.2 Aragtida Islaamka
1.3 Aragtida Markhaatiyaasha Yehowah
Afarta "Injiil" (The Four Gospels)[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Aragtida Masiixiyiinta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Afarta "Injiil" ee qaanuuniga ah waa afarta buug oo yihiin afarta nin oo la kala yiraahdo: Matayos, Markos, Lukos, iyo John oo ay u yaqaannaan kiristaanku (Yooxana). Sababta ay buugaastaas laf-dhabarka ugu noqdeen caqiidada kiristaankana waa ayadoo sannadkii 325kii miilaadka, lagu ansixiyay afartaas buug shir diineed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaashii kiristaanka ee xilligaas. Shirkaas oo loo yaqaan (Council of Nicea). Wakhtiga xaadirka ah magaaladaas magaceeda waxaa la yiraahdaa Iznik, waxayna khariidad ahaan raacsan tahay jamhuuriyada Turkiga. Waxaa shirkaas in la'isugu yimaado sabab u ahaa ayadoo ay jirtay dood adag oo kiristaankii xilligaas jiray ka dhex taagnayd. Doodaas oo ku saabsanayd ilaahnimada nabi Ciise (nabadgalyo dushiisa ha ahaatee). Waxaana la'isku haystay Ciise waa ilaaا iyo ilaah ma'ahane wuxuu ahaa qof abnii-aadam ah oo Ilaahay uu soo diray.
Shirku wuxuu ku dhammaaday go’aamadii ugu muhiimsanaa: garashada ilaahnimada Ciise Masiix iyo ahaanshaha Wiilka Ilaah.
Markii la qaatay afartaas buug, ayaa amar lagu bixiyay in la gubo dhamaan qoraalladii iyo buugaagtii ay wateen culimadii kasoo hor jeedday iilaahnimada nabi Ciise (nabadgalyo korkiisa ha ahaatee). Inta aan afartaas buug la xulinna, waxaa halkaa isugu yimid dad kala wata ilaa 50 buug oo kala duwan. Waxaa amar lagu bixiyay marka in la gubo dhammaan wixii aan ahayn afartaas buug. Islmarkaasna la dilo qofkii lagu qabto asagoo haysta buug khilaafsan afarta buug oo shirka laga ansixiyay. Maalinkaas wixii ka dambeeyayna waxaa dhidibbada loo aasay diinta kiristaanka ah ee maanta dunida ka jirta.
Aragtida Islaamka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Fikrad walba oo kasoo hor jeedda ra'yiga ay qabto kaniisadda afartaas buug ku dhisanna daaqaddaa laga tuuray, waxaana loo diiday inay soo baxdo.
Markii dhanka diinta Islaamka laga fiiriyo, ma jiraan wax ka yimid Ilaah xagiis oo hadana sheegaya inuu jiro ilaah aan ahayn Ilaaha dhabta ah, halkana ah ee koonka abuuray, rasuulladana soo diray. Sidoo kale Quraanka kariimka ah dhexdiisa waxaa ku xusan in nabi Ciise uu reer banii-israa'iil oo ah dadkii loo diray ugu yeeray inay caabudaan Ilaahay kaligiis. Ilaahay (SW) wuxuu leeyahay:
و "قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار"| المائدة: 72.
Waxaa sugan inuu jiro kitaab Injiil ah oo uu Ilaahay u waxyooday nabi Ciise.
Waxaa kale oo meesha ku jira dowrkii waynaa oo shakhsiga ay kiristaanku u yaqaannaan (Rasuul Bawloos) ama (Paul The Apostle) uu ka qaatay rogitaanka Injilkii nabi Ciise iyo risaaladii loo soo dhiibay. Sababtoo ah ninkaan taariikh ahaan waxaa sugan inuu ahaa nin yuhuud ah oo aad ula dagaallaamay dadkii nabi Ciise raacay. Qayb aad u wayn ayuuna ka qaatay silcintii iyo cadaadiskii dadkaas loo gaystay. Intaas asagoo u gaystay dadkii nabi Ciise raacay, ayuu hadana si kadis ah wuxuu isugu rogay nin sheeganaya inuu Ciise aaminay, oo rumeeyay. Wuxuuna sheegtay in Ciise laftirkiisa uu la hadlay una sheegay inuu wiilkii Ilaahay yahay, amrayna inuu u adeego diinta kiristaanta.
Aragtida Markhaatiyaasha Yehowah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Markhaatiyaasha Yehowah oo keliya ayaa isku daya inay raacaan tusaalaha nebi Ciise iyo Masiixiyiintii hore.
Markhaatiyaasha Yehowah Erayga "saddexmidnimo" Kitaabka ma ku jiro. Aayadaha waxay caddeeyaan inuu Ilaahay saddex ahayn. Dadku naar kuma gubtaan weligood. Binu'aadanka ma qabaan naf aan dhimanaynin. Kirishtaanka ma caabudaan kuwa ka dhintay. Boqortooyada Ilaahay baa beddeli doonto dowladaha kale oo dhan. Masiixiyiinta runta ah siyaasadda kama qaybqaataan. Masiixiyiinta runta ahi dagaal ma galaan. Ilaahay doonistiisa waa binu'aadanku inay weligood dunida ku noolaadaan. Magaca Ilaahay waa Yehowah. Waxaa cad inuu Ilaahay Qorninkiisa Quduuska ah daafacay sidaynu maanta Eraygiisa daahirka ah u akhrisanno. Hal diin oo run ah ayaa jirta. Diimaha beenta ahi Ilaahay runta kama sheegaan. Waxyaalaha ay barto waxaa ka tirsan runta ku saabsan nafta iyo rajada nolol weligeed ah oo adduun janno ah lagu heli doono. Diinta saxda ah kama cararto inay daaha ka feyddo beentay diimaha sheegaan. Diinta saxda ah waxay muhimmadda saartaa Boqortooyada Ilaahay oo ah rajada keliya oo binuʼaadanka. Diinta saxda ah waxay inagu guubaabisaa jacayl aan xaasidnimo lahayn. Waxay bartaa in la ixtiraamo qabiillada oo dhan, waxayna soo dhoweysaa dadka jinsi kasta, dhaqan kasta, qowmiyad kasta iyo luqad kasta. Jacayl awgiis, xubnaha diinta saxda ah dagaallo kama qaybqaataan. Diinta saxda ah ma laha wadaaddo lacag lagu masruufo. Dadka ku jirana laguma magacaabo cinwaanno kor u qaado ama kuwa kale ka sarraysiiyo. Diinta saxda ah kuwa ku jira marnaba kama qayb qaataan arrimaha siyaasadda. Diinta saxda ah ma ahan dhaqan ama caado la fuliyo, balse waa hab nololeed. Kuwa diinta runta ah ka tirsan Kitaabka xeerarkiisa sare ayay dhan walba ee noloshooda ku xajiyaan. Caabudaadda “Ilaaha barakada leh” qalbigooda kuma cusla, haddaba farxad weyn bay ka helaan. Kuwa diinta saxda ah ku dhaqmo waxay ku jiri doonaan dadka laga tiro badan yahay. Markayna doonista Ilaahay fuliyaan, badanaa waa la yasaa, waa lagu qoslaa waana la silciyaa. Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid. Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono. Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa. .
„ Ilaaha Qaadirka ah sinaba uma oggolaan karin waxaas oo kale. Qur'aanku wuxuu ku dhawaaqay: "Qofna ma beddeli karo qaynuunnada Eebbe."-Suuradda 6, Al-Ancaam (Lo'da), aayadda 34. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku dhawaaqayaa mid la mid ah sida soo socota: “Cawska qoyan waa engegay, ubaxuna waa engegay; laakiinse erayga Ilaaheennu weligiisba wuu waari doonaa. ” - Ishacyaah 40:8. Qaar baa isku dayay inay erayga Eebbe been ka sheegaan, laakiin kuma ay guulaysan. Tusaale ahaan, warqaddii kowaad ee Yooxanaa, 1Jo cutubka 5, aayadda 7, ereyada soo socda ayaa mar keliya lagu daray: “Jannada dhexdeeda, Aabbaha, Ereyga, iyo Ruuxa Quduuska ah: saddexdaasna waa mid.” - Erayadani kama muuqdaan mid ka mid ah qoraaladii hore ee Baybalka laakiin mar dambe ayaa lagu daray si loo taageero caqiidada Saddexmidnimada ee beenta ah. Culimadu, waxay og yihiin in ereyada noocaas ahi ay yihiin kuwo been abuur ah, oo tarjumaadaha Kitaabka Casriga ah ay meesha ka saarayaan. Qoraalo badan oo Kitaabka Quduuska ah oo afar ama shan qarni ka weyn Qurʼān ayaa maanta lagu arki karaa matxafyada. Marka Kitaabka Quduuska ah ee maanta la barbardhigo qoraalladii hore, waxaa caddaanaysa in qoraalka aan maanta haysanno uu la mid yahay kii Ilaah u waxyooday addoommadiisii ​​hore inay qoraan. Isbarbar dhig suuradda 10, Yunis (Yoonis), aayadda 94: “Haddaad ka shakido waxaan kuu waxyoonay waydii kuwa akhriyey Kitaabka ka hor.”
↑ Miyaad Rabtaa Inaad Ogaatid Runta?
↑ Sidee Buu Abuuraha Inoogu Sheegaa Ballamadiisa Cajiibka Ah?
Booqo[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Masiixiyad&oldid=232336"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Maarso 2022, marka ee eheed 03:20.